ODUU AMMEE! Ameerikaan qoqqobbii Itoophiyaa irra kaa’uuf akka jirtu beeksifte. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsODUU AMMEE! Ameerikaan qoqqobbii Itoophiyaa irra kaa’uuf akka jirtu beeksifte.
#ODUU AMMEE! #Ameerikaan qoqqobbii #Itoophiyaa irra kaa’uuf akka jirtu beeksifte.
#Mootummaan Itoophiyaa guyyoota #kurnan dhufan keessatti;
1. Hidhamtoota siyaasaa hin hiiktu yoo ta’e,
2. Waajjirri paartilee #morkattootaa guutuu Oromiyaatti hin banaman yoo ta’e
3. Paartileen morkattootaa Oromoo walabummaan duula ‘na filadhaa’tti hin galan yoo ta’e
4. Siyaasa walxaxaa filannoon booda rakkoo uumuu danda’u jedhamanii yaadaman hunda karaa mirga nama tokkoo hin tuqneen kan hin furre yoo ta’e Ameerikaan #qoqqobbii Itoophiyaa irra kan keessu ta’uu Ministeerri Dhimma Alaa Ameerikaa #Antoonii Biliinkeen beeksise.
➙Wallaallaan of jalatti, beekaan fageessee yaada irbuu shinniiggaa irraa
Eebbifamaa Yuunvarsiitii Jimmaa kan ture, Barataa Mohammad Deeksisoo, Waltajjii eebbasaarratti hidhamtoota siyaasa Oromoof waan sagalee ta’eef kan hidhamee ture, guyyaa kaleessaa mana murtiitti dhihaachuusaa Abukaatoon isaa himan.
Abukaattoo Mohammad Deeksisoo kan ta’e, Obbo Obsinaan Girmaa akka jedhanitti, gurbaa waltajjii sanarratti weellisaa ture dabalatee, Mohammad Deeksisoos gaafuma eebba sana kan qabaman yoo ta’an, guyyaa kaleessa Abbaan Alangaa himata itti banee jiraachu himu.
Himatni Mohammad Deeksisoo irratti baname, qaama hidhate waliin quunnamti qabda kan jedhu yoo ta’u manni murtii himaticha ilaaluuf guyyaa har’atti beellamuusaa himu.
Hidhamaan kun gama isaatiin mana hidhaa keessatti reebichi hamaan irratti raawwatamuu, ragaa dirmammuu qaamaasaa waliin mana murtiitti agarsiifatee kan ture ta’uu Abukaattoon kun himee jira. Mirga hidhaman tokko mana hidhaa keessatti seeraan qabamuuf qabu cabuusaa dabaltee, sarbama mirga namoomaa isarratti raawwateefis Mohammad mana murtiichaatti himachuun dhaga’ameera.
Mohammad Deeksisoo eebbifamaa bara 2013 Yuunvarsiitii Jimmaa yeroo ta’u, waltajjii eebba barattootaa sana irratti, Obbo Shimallis Abdisaa fi Aadde Maahazaa Ashaannaafii argamanii yeroo jiran, Mohammad ammoo sagalee guddistuu fudhachuun, “Jawaar Mohammad hiikaa, Hidhamtoota siyaasaa hiikaa” jechuun hidhamtoota siyaasaa Oromoof sagalee ta’uun isaa ni yaadatama.
Waa’ee yaala fayyaa Baqqalaa fi Jawar faa ilaalchisee Abiy diraamaa taphataa jira. Manni murtii Federaalaa olaanaan (Federal High Court) akka hospitaala Landimark’tti yaalaman ajaje. Mana Murtii Waliigala Federaalaa (Federal Supreme Court) akka hospitaala Landimark deemanii hin yaalamne ajajee garuu ogeeyyin fayyaa hospitaala Laandmaark jiran meeshaalee barbaachisaa ta’an fe’atanii bakkuma hidhamtoonni jiranitti dhaqanii haa yaalan kan jedhu ajaje.
Meeshaa hospitaalaa keessaa guuranii mana hidhaa ammoo geessuuf hin deeman. Sababnis dhukkubsattoota biroo hoo maaliin yaalu? Waan hin fakkaanne. Osoma geessaniyyuu danqaa biraa uumu waan diraamaa taheef. Amma diraamichi akka isaaniif tolutti yeroof burjaajii uumaa jira. Miidiyaaleen akka BBC dhadacha lidataa waan hosdofaniif akka hospitaala dhuunfaatti yaalaman manni murtii ajaje jedhanii gabaasan. Mootummaan akka hin dhoorgin fakkeessan. Ummata burjaajessan. Kana jidduutti hoggantoota irra miidhaan gahaa jira. Abiy kan barbaadu ummata burjaajessee lafarra harkisee jara miidhuudha.